Ngamanye amaxesha siyazibamba sicinga ukuba asiyazi indlela yokuphila ngokufanelekileyo. Yintoni ebalulekileyo ebomini bethu kwaye yintoni eyesibili? Yintoni oyifunayo ngokwenene ukuyiqwalasela, kwaye yintoni onokuyenza ukuba uyihambe? Ngokuqhelekileyo, sinokuyilungisa njani ubomi bethu? Enyanisweni, zonke izinto zilula kwaye zilula - kufuneka ubeke phambili kwaye uzilandele rhoqo.
Xa ugqiba ukuba yintoni ebomini kubaluleke kakhulu kuwe, akudingeki ukuba uthembele kumava obomi bomntu. Ngokuqinisekileyo, baninzi abantu abaye babona ngaphezulu kwaye banokunceda ngeengcebiso. Nangona kunjalo, ngamnye wethu unengqondo yakhe, iimpawu zakhe kunye nokunye. Ngoko ke, xa ucinga ngezinto ezibalulekileyo kuwe, zithembele kuphela engqondweni yakho, iimvakalelo kunye neemvakalelo. Izinto eziza kuqala ziza kuba ngabakho, ngabanye. Ngokuqhelekileyo, abantu babeka phambili ebomini babo izinto eziphambili, kuba zixhomekeke kwiimbono zabanye okanye ziphembelelwe ngempembelelo. Ngokuqhelekileyo oku kwenzeka rhoqo kwiimeko apho umntu enegunya elaneleyo labazali. Bacinga uxanduva lokugqiba yonke into. Ngenxa yoko, umntu uphila ngokwecebo, ehlanganiswe ngabo, kungekhona indlela yena ngokwakhe afuna ngayo. Ngoko ke, ukuba ubona ukuba uluvo lwabathandekayo bakho aluhambisani ngokupheleleyo neyakho - xhathisa. Ewe, yimiba yezobugcisa apho izinto eziphambili ezikuko zingakulimazi. Kwezinye iimeko, iimvo zabanye kufuneka zivezwe. Kodwa ukuba into oyifunayo ebomini, ayisongeli ubomi, okanye impilo, ngoko unokuzimela ngokuphepha. Abantu abaninzi abaqondi ukuba ngamnye wethu unendlela yethu yobomi, ngoko akudingeki ukuba ubeke izimvo zakho. Kubhetele xa umntu "atshaya iimbonisi" aze eze kwisigqibo esifanelekileyo, kunokuphila komnye umntu, okungeke kumlethe uvuyo, usizi.
Yiba Neengxaki Zakho
Ukubaluleka kokuqala, okokuqala, kufuneka uvume ngokunyanisekileyo iminqweno yakho. Ngaphandle koko, awukwazi ukuqonda into ebalulekileyo ebomini bakho into ephambili. Ngoko keka ukwesaba uze undixelele into oyifunayo ngokwenene. Mhlawumbi umnqweno oyintloko kukuba ube nosapho kwaye ukhulise abantwana. Ukuba uqaphela ukuba awuyi kuphila ngaphandle kokuziqonda, yenza umsebenzi okanye ubugcisa. Kubantu bokomoya abafuna ukuqonda ngamagunya aphezulu kunye nemba, indlela yokomoya ingabalulekile ngokwenene. Ungesabi iminqweno yakho. Nangona bahluke kwiinjongo zabanye, akukho nto eyoyiyo kule nto. Ukukhethwa ngamnye kuchaphazela isimo sakhe sengqondo, ukuphuhliswa kwengqondo, uluntu, intsapho, indawo kunye nezinye izinto ezininzi. Ngoko nayiphi na iminqweno engahambisani nokusingqongileyo inelungelo elipheleleyo lobomi. Khumbula ukuba kuphela emva kokunyanisekileyo ukuphendula umbuzo: Yintoni endiyifunayo ebomini, unokuthetha ngendlela yokubeka phambili ngokufanelekileyo. Emva kwakho konke, nguye kuphela ophumelelayo ofuna ukufikelela eziphakamileyo. Ngaphandle koko, umntu uphila ubomi ngandlela-thile. Umzekelo, abaninzi banokufunda kwizinto ezizodwa abangazithandiyo, ngokulandelanayo, iyunivesithi ayinqumle ukuba yinto ephambili kubo. Nabanye abafazi abakwazi ukukhulisa umntwana ngokufanelekileyo, kuba bazalela ngokungafuniyo, kwaye kubaluleke kakhulu kubomi babo, abantwana banokuba ngumthwalo ongenamdla. Kodwa abo bayazi kakuhle oko bafuna, banokubeka phambili phambili kwaye bahambe ngokuphila kuphela.
Xa usugqibile oko ufunayo ebomini, ungaqala ukubeka izinto eziphambili. Ukwenza oku, kufuneka nje ukuba ufumane iingongoma eziphambili ukufeza injongo yakho. Ngokomzekelo, ukuba ufuna ukuhlala e-States, ngoko-ke oko kukubaluleka kwakho ukufunda ulwimi, ufumana ithuba lokuhamba (umzekelo, ukufumana ikhadi eliluhlaza), ukumba iimali eziyimfuneko zokuhamba. Ukuba into ebaluleke kakhulu ebomini kwintsapho kunye nabahlobo, okokuqala kukubakho ithuba lokuhlala kunye nabo, ukunika aba bantu ixesha elingangoko kunokwenzeka, ithuba lokuzikholisa ngezipho. Oko kukuthi, njengoko ubonayo, iinjongo kunye nezinto eziphambili zixhomekeke ngokuqinileyo. Kodwa phakathi kwazo zonke izinto eziphambili kufuneka zihlale zibaluleke kakhulu, nto leyo isiseko esibalulekileyo sokufezekisa iphupha. Ngaphezu koko, ngamaxesha ahlukeneyo akukwazi ukuhluke ngokupheleleyo. Ngokomzekelo, kwindawo ethile yokuphila, into ephambili ingaba isifundo, ngoko-ukuthandana kunye noqhagamshelwano nabantu abatsha, ukufuna izixhumanisi eziyimfuneko. Emva koko, okuza kuqala kuyakunikwa ukukhutshwa kwemali yokuvula ishishini kunye njalo. Akufanele kuthathelwe ingqalelo ukuba into ephambili "ephambili" kufuneka ihlale enye kunye nayo yonke impilo. Wonke umntu onokubaluleka ngokuphambili uyahluke. Ungesabi kwaye uphathise imeko ngokungathi uthengisa umntu okanye umntu. Ukuba umntu utshintsha izinto ezibaluleke kakhulu ebomini, ubomi bakhe buya kutshintsha.
Enyanisweni, ukubeka izinto eziphambili, silungiselela ubomi bethu kwaye sincedise ukuba singasuki endleleni ekhethiweyo. Ngoko ke, ukuba uthembekile kuwe, ngoko inkqubo yokukhetha izinto eziza kuqala kuyo ayiyi kuba nzima kuwe. Uya kuhlala uyayazi into oyifunayo, unokuchitha ixesha elikhulu kunani na, kwaye yiyiphi imisebenzi, ngaphandle kwesifo sezela, iya kuhlehliswa emva koko. Ukongezelela, ilungiselelo elichanekileyo lezinto eziphambili zikunceda ukuba uphile ngokuvumelana neminqweno yakho kwaye ungazisoli ngexesha elingenamsebenzi kwaye ulahlekelwe yiminyaka oye wayichitha ukwenza ibhizinisi elingadingekile nelingathandekiyo, endaweni yokufumana into enenjongo kuwe.
Ungasindisa njani umtshato wentsapho?
Izinto ezinobuso ebusweni zithetha
Yintoni abafazi besabayo?
I-Horoscope ye-Capricorn Woman ngo-Agasti 2016
Ii-apulo ezinobusi kwi-microwave
Unyango lwe-anemia kunye nokutya kwamavithamini
Ukutya okuhlukileyo: ukuhambisana kwemveliso
Ukwahlukanisa uJohnny Depp no-Amber Hurd: ubundlobongela basekhaya okanye ukukhohlisa imali? Iinkcukacha ezintsha kunye neefoto
U-Alla Pugacheva ubonise ividiyo entsha yeLisa e-Instagram